Maxay tahay xulafada cusub ee Afrika ee ay Masar ku wajahayso khilaafka biyo-xireen Webiga Nile? | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Maxay tahay xulafada cusub ee Afrika ee ay Masar ku wajahayso khilaafka...
Maxay tahay xulafada cusub ee Afrika ee ay Masar ku wajahayso khilaafka biyo-xireen Webiga Nile?
Dowladda Masar ayaa waxa ay iskudayaysaa inay xoojiso awooddeeda diblumaasiyadeed iyo mid milateriba ee ay ku leedahay gudaha Afrika, xilli ay sare usii kacayso muranka kala dhaxeeya waddanka Itoobiya ee salka ku haya dhismaha biyo-xireenka ballaaran ee uu dalkaas ka dhisanayo Webiga Nile, ayaa waxaa sidaasi qoray weriyaha BBC-da ee ka faallooda arrimaha Masar Majdi Cabdulhaadi.
Hasayeeshee markii ay maquuratay dagaalladii Carabta iyo Israa’iil, waxaa hoos u dhacay xiriirkii kala dhexeeyay dalalka Afrika ee ka hooseeya Saxaraha Afrika.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, sanadihii la soo dhaafay, Masar waxa ay dib u bilowday xiriir sare oo ay dalalkaas la yeelanayso, gaar ahaan dalalka uu maro Webiga Nile.
Qaahira ayaa waxa ay markii horaba heshiisyo isdhexgal ah oo muhiim ah ay la laheyd Suudaan, halkaas oo dhawaan ay labadaasi dal ka fuliyeen dhoollatus milateri oo ay wadajir u fuliyaan, kaas oo ay ka qeyb qaateen diyaaradaha dagaalka iyo ciidammada gaarka u tababaranba.
Itoobiya waxa ay leedahay biyo-xireenka waxa uu koronto siin doonaa 65 milyan oo muwaadiinteeda ah
Masar ayaa quwadeeda koronto waxa ay gaarsiisay waddanka Suudaan waxaan jira qorshe khadadka tareenka dalkaas lagu gaarsiinayo, iyadoo uu jiro qorshe wayn oo lagu dhisay khad tareen oo isku xira magaalooyinka Alexandria iyo Cape Town.
Waxa ugu muhiimsan ee keenay isbadelka siyaasaddeeda arrimaha dibadda ayaa ah biyo-xireenka muranka badan uu ka dhashay ee Itoobiya ay ka dhisanayso Webiga Nile, kaas oo loo soo gaabiyo (GERD).
“Masar ayaa muddo dheer waxa ay ku tiirsanayd diblumaasiyadda si ay u xalliso kala duwanaanshiyaha kala dhaxeeya Itoobiya ee salka ku haya biyo-xireenka GERD. Hasayeeshee waxaad mooddaa wadahadalladaasi ay miro-dhali la’yihiin,” ayuu yiri Nael Shama, oo khabiir ku ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Masar.
Tanzania waa tusaale kale, halkaas oo Masar ay si wayn u maalgashanayso biyo-xireenka way nee Julius Nyerere ee laga dhisayo Webiga Rufiji. Qaahira ayey iska caddahay inay doonayso inay caddayso mashruucaas uu tusaale u yahay sida ay u doonayso inay gacan ka gaysato horumarinta dalalka uu maro Webiga Nile.
Taasina waa farriinta ay Masar – oo aan lahayn hab kale oo wayn oo ay ku hesho biyo la cabo iyo kuwo beeraha loo adeegso webiga Nile ma ogiyee – ay isku-dayayso inay gaarsiiso caalamka.
Dalxiisayaal badan ayuu Webiga Nile u soo jiidaa waddanka Masar
Masar kama soo horjeeddo biyo-xireenka Itoobiya, hasayeeshee waxa ay aad uga walwalsan tahay saamaymnta ay arrintaas ku keeni karto qulqulka biyaha Nile haddii Itoobiya ay diiddo inay saxiixdo heshiiska sharciga ah ee qeexaya sida ay u maamulayso howlgalladeeda.
Waxa ay ka cabsi qabtaa suuragalnimada in biyo-xireenka uu burburin doono beeraha Masar uuna khasin uun gaarsiin doono dhul wayn, arrintaas oo horseedi karta abaar ballaaran iyo shaqo la’aan. Itoobiya ayaa dhankeeda, waxa ay biyo-xireenka GERD u aragtaa inuu muhiim u yahay horumarka ay doonayso inay ku tallaabsato, iyo korontada ay dadkeeda u baahan yihiin.
Previous articleSiyaasi Mustafe Shiine oo Dhaliilay Hadalki Maxamuud Xaashi Cabdi:-
Next articleDilkii George Floyd: Derek Chauvin oo xabsi lagu xukumay